Alaotra: miakatra be ny karaman’ny mpanetsa | NewsMada
Alaotra: miakatra be ny karaman’ny mpanetsa
Enjikenjehana ny fanetsana satria tsara, tena nisy rotsak’orana. “Tokony ho volana desambra ny fanetsàna, saingy izao vao ampy anaovana izany ny rano eny an-tanimbary”, hoy Rakotoarinesy Mamy, mpamboly any Tanambe-Amparafaravola. Lasa mikarama manetsa hatramin’ny tovolahy, satria tafakatra 1 600 na 1 800Ar mihitsy aza ny velarana folo makazato (10 m x 100 m ). 1 000 na 1 200 Ar anefa izany isan-taona. Tsy midina manetsa aty Antsihanaka intsony ireo vehivavy avy any Imerina, amin’izao fotoana izao, raha tsy miakatra maka sy manangona azy ary miantoka ny saran-dàlana’izy ireo, izay mila azy.
Mitady hilaza sahady indray izao ireo mpamboly sasany fa”…lasa betsaka indray ity ny orana”. Manomboka resy lahatra izy ireo fa tena mihatra tokoa ilay fiovaovan’ny toetr’andro. Ary na inona teknikam-pambolena ampiharina, ny fahampian’ny rano aloha no fepetra voalohany mampahomby ny fambolem-bary. Takin’ny ao Tanambe sy Vohitsara ny fanajariana ny an’Anony (radier).
Any amin’ny tapaky ny volana marsa any, araka ny filazan’izy ireo, vao tena ho fantatra raha ho tsara na tsia ny voka-bary. Novolen’ny ankamaroan’ny mpamboly ny makalioka sy ny tsemaka, araka ny fahitan-dRakotoarinesy azy.